OnePlus waxaa ku dhacay xadgudub amni oo halis galiyay xogta isticmaaleyaasheeda | Androidsis
OnePlus markale ayuu dhib soo gaadhay a khalkhal amni taasi oo halis gelinaysa xogta shaqsiyadeed ee kala duwan ee isticmaaleyaasheeda. Tani waxay ahayd dhacdadii ahayd in Ziv C., oo xubin ka ah kooxda amniga shirkadda, ay tahay inuu bixiyo warbixin uu ku muujinayo cawaaqibka ay tani abuuri karto.
Cilada u oggolaatay macluumaadka isticmaalaha inuu daadiyo ayaa horay loo hagaajiyayLaakiin maaha iyada oo aan la eegin in la qaado tallaabooyin lagu raadinayo shakhsiyaad suurtagal ah oo ka faa'iideystay xilligan oo laga yaabo inay sababaan xanaaq.
Iyadoo loo marayo barnaamijka rasmiga ah ee loo yaqaan 'OnePlus forum', Ziv C. wuxuu wax walba si faahfaahsan ugu gudbiyay, isagoo sharraxaya xogta gaarka ah ee la soo bandhigi karo. Dhanka kale, natiijo ahaan, ayuu yiri Waa suurtagal in adeegsadayaasha la kashifay ay bilaabaan inay helaan - haddii aysan horey u sameynin - emails emails. Tani waxay ka muuqataa bayaankiisa, oo uu dhowaan ku daabacay bogga aan kor kusoo sheegnay oo aan hoos ku dhajinay:
Tani waa Ziv oo ka tirsan kooxda amniga. Waxaan dooneynaa inaan kugula socodsiino inaan ogaanay in koox aan loo fasaxin ay heleen qaar ka mid ah macluumaadka dalabaadka isticmaaleyaasheena. Waxaan xaqiijin karnaa in dhammaan macluumaadka lacag bixinta, furaha sirta ah iyo xisaabaadka ay yihiin kuwo aamin ah, laakiin magaca, lambarka xiriirka, cinwaanka iimaylka iyo cinwaanka dhoofinta ee isticmaalayaasha qaarkood ayaa laga yaabaa in la kashifay. Isticmaalayaasha ay dhibaatadu soo gaadhay waxay heli karaan emayllada spam iyo ka phishing dhacdadan awgeed.
Waxaan qaadaynaa talaabo deg deg ah oo aan ku joojineyno kuwa ku soo xadgudbay iyo xoojinta amniga Kahor intaanan bulshada loo soo bandhigin, waxaan ku ogeysiineynaa isticmaaleyaasheena ay saameysay emayl Waqtigaan, waxaan la shaqeyneynaa hay'adaha ay quseyso si baaritaan dheeri ah loogu sameeyo dhacdadan.
Aad baan uga qoomameynaa tan waxaana naga go'an inaan sameyno wax walba oo karaankeena ah si aan uga hortagno dhacdooyin kale. Nala soo xiriir wixii su'aalo ama walaac ah ee Adeegga Macaamiisha. »
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Haddii aad tahay isticmaale OnePlus, waxaa laga yaabaa inaad hesho emayllo spam ah oo ku mahadsan daadinta xogta badan